ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » လာသောအခါဆက်ဆံရေးအသစ်ညဉ်းဆဲရန် "ကို Right Time ကို" Is?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 30 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ပြိုကွဲခက်ခဲတဲ့များမှာ. မည်သို့ပင်ဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်သူသို့မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်အဆုံးသတ်, တကပူးပေါင်းပြီးအဆုံးအောက်ပါတစ်ခုစိတ်ခံစားမှုအချိန်ရှိနိုင်ပါသည်. ဒါကြောင့်နောက်တဖန်သင်တို့တစ်ခုတည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာပြီးတပြင်လုံးကိုချိန်းတွေ့ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးမှာ bit နဲ့လွှမ်းမိုးသောခံစားနိုင်ပါတယ်.
နောက်တဖန်သင်တို့နှင့်ဝမ်းနည်းစွာနှင့်ချိန်းတွေ့စတင်စတင်သင့်ပါသည်အခါသင်တွေးမိပေမည်အဆမျိုးရှိပါတယ်, ဤပြဿနာကိုရန်မလွယ်ကူသောဖြေရှင်းချက်လည်းမရှိ. တစ်ပြိုကွဲပြီးနောက်ဆက်ဆံရေးအသစ်လိုက်ရှာစပ်လျဉ်းအတွက်လိုက်နာကျင့်ရန်မတိကျသောအချိန်ဇယားလည်းရှိ၏ထို့ကြောင့်လူတိုင်းသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာပြိုကွဲတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ.
ဒါကြောင့်သင်ဟာဆက်ဆံရေးအသစ်စလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ, ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းစတင်ချိန်းတွေ့? ဒီနေရာတွင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်မှန်လျှင်သင်သိကူညီပေးတဲ့အနည်းငယ်သောအကြံပြုချက်များဖြစ်ကြသည်:
ငါသည်အမုသား-ပြိုကွဲကိုစို့့မဟုတ်ဘူး. သင်ကနေစဉ်များအတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်သန္ဓေသားကိုရေခဲမုန့်တစ်ပိုင့်နှင့်သင်၏အိပ်ရာပေါ်အနေအထားနှင့်အနေနဲ့ Netflix သို့တက်ခွေလိုလိမ့်မည်. ဆက်ဆံရေး၏အဆုံးစိတ်မနာစေကြဖို့အချိန်ပေးသာမန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်. အခါစိတ်ဆင်းရဲတူမိုးသည်းထန်စွာစိတ်ခံစားမှုငှါကြွလာ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အနာကိုအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေအချို့သောအချိန်ယူနိုင်တယ်. ကျန်းမာပြီးရင့်ကျက်လမ်းတစ်ပြိုကွဲနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းသင်၏အသက်တာနှင့်အတူကိုင်တွယ်နှင့်ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်သည့်အခါမကြာခဏသင်အရာအားလုံးကိုမေးမြန်းကြသည်စွန့်ပစ်. မှားသွားတယ်ဘယ်အ? ငါ့အမှားခဲ့သည်? ငါသည်အဘယ်သို့ပြုမိကွဲပြားခြားနားနိုင်? သင့်ပျက်ကွက်သောဆက်ဆံရေးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်ပေးခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုရပ်တန့်, ဒါကြောင့်သင်မဆိုပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားမိစေရန်မသွားမယ့်အဖြစ်. ဆက်ဆံရေးထွက်အလုပ်လုပ်မပြုခဲ့ခြင်းနှင့်နောင်တရခံစားချက်တွေကိုအပေါ်ရှိနေဆဲဟုမသည်သင်တို့အပေါ်မှာရွှေ့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုလက်ခံခြင်း. အမှားတွေကနေလေ့လာသင်ယူခြင်းကအကောင်းဆုံးသင်ဆက်ဆံရေးထွက်ချင်တယ်ဆိုတာသိမှလမ်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဖြစ်.
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်ကြိုးစားရန်ဤအခ​​ျိန် ယူ. အသစ်သောအရာကြိုးစား. အစဉ်အဆက်ကိုသင်၌စိတ်ဝင်စားကြသော်လည်းကြိုးစားခဲ့ဘယ်တော့မှတစ်ဝါသနာခဲ့? အခုတော့ပြည့်စုံသောအချိန်ဖြစ်ပါသည်! တစ်ဦးဘာသာစကားသင်တန်းကိုယူ, ပင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို event မှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်မာရသွန်ပြေး. ရွေးချယ်စရာများအဆုံးမဲ့များမှာ. သင်ပျော်ရွှင်စေသည်အသစ်တစ်ခုခုကိုကြိုးစားကြည့်ပါနဲ့ကိုယ့်သင်တို့အပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်.
အချို့လူများကတစ်ပြိုကွဲပြီးနောက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများဆက်ရှိနေရန်တတ်နိုင်ကြသည်, သင်မူကား, ရှာတွေ့နိုင်လျှင်သင်ပဲသူတို့အပေါ်မှာရရာတို့ကိုထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားနေမစောင့်နိုင်, သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူအားလုံးအဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့လိုလိမ့်မည်, ကန့်တွင်ယာယီဖွင်လျှင်ပင်. သင်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဆံရေး rekindle ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသေးကြောင်းမကျတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေပေးကမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့အခါအပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့ခက်ပါတယ်. မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့နောက်ပိုင်းတွင်လမ်းဆင်းအချိန်လည်းရှိ၏, ဒါပေမယ့်ပြိုကွဲသင့်ရဲ့စိတ်နေဆဲလတ်ဆတ်သောအခါ, ဒါကြောင့်ကိုယ့်အကွာအဝေးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူစေခြင်းငှါ.
အဆိုပါပြန်ခုန်ထွက်ဆက်ဆံရေးဟာပါရာဒိုင်းချက်ချင်းချိုးရရန်လိုအပ်နေသည်ဟုတစ်ဦးအလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်ဤဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်ပြန်ခုန်ထွက်လိမ့်မည်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောပြနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုလမ်းထွက်လှည့်စေခြင်းငှါ,, သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပေမယ့်. သင့်အနေဖြင့်သင်နောက်ဆုံးဆက်ဆံရေးမှ reeling နိုင်အပေါင်းတို့နှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာခံစားချက်တွေကိုပတ်သက်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအသစ်သို့သူတို့အားအဟောင်းခံစားချက်များကြောင့်ဆောင်ခဲ့ရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြမည်အကြောင်း.
ကပျော်ပါးခဲ့ပြန်ခုန်ထွက်မှကြွလာသောအခါ (I.E. ကိုကျပန်းအတူမိတ်ဖက်အဖွဲ့များလိင်ဆက်ဆံ, အကျိုးရှိတဲ့မိတ်ဆွေများ, စတာတွေ), သူတို့ပဲရှောင်ကြဉ်သင့်. တစ်ဦးအမြန် hookup ကောင်းတစ်စိတ်ကူးတူထင်ရနိုင်, ဒါပေမဲ့သူတို့သို့မဟုတ်. တစ်ပြိုကွဲဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်လေ့ပြီးနောက်လျော့နည်းအထီးကျန်ခံစားချက်တစ်ခုနည်းလမ်းအဖြစ်ပေါ့ပေါ့တန်တန်လိင်ကိုအသုံးပြုခြင်း; အရာအားလုံးကပြောပါတယ်, ပြုပြီးနောက်သင်ပိုမိုဖွယ်ရှိထက်ပိုဆိုးခံစားရပါလိမ့်မယ်. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုစိတ်ဆင်းရဲ Save နှင့်ပြန်ခုန်ထွက်ဆက်ဆံရေးက / ပျော်ပါးခဲ့ရက်၌.
နောက်တဖန်သင်မဖြစ်သူဦးတည်မေတ္တာနှင့်ဆုံးရှုံးမှုခံစားချက်များရှိနေဆဲဟုသောအခါ, ကိုအလွန်အမင်း၎င်းတို့၏ Facebook စာမျက်နှာတွင်စစ်ဆေးနေရပ်တန့်ပါပြီ (သင်ရှိသည်မဟုတ်ဟန်ဆောင်မ) နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမျှော်လင့်ပေးခြင်းကိုရပ်တန်သင်ရှေ့ဆက်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါ.
ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသင့်အားတက်နောက်ဆုံးမှာဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နောက်တဖန်သင်တို့နှင့်ချိန်းတွေ့စတင်သင့်တဲ့အခါသင်ပြောပြဘယ်သူသည်သင့်ပတ်လည်သူတို့အားစကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့. သင်နောက်ဆုံးတော့အသစ်တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းဖို့အဆင်သင့်ခံစားရတဲ့အခါသင်ချိန်းတွေ့စတင်သင့်သောအခါသည်. ထိုနောက်မှအားလုံးသင်၏အသက်တာဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သေးသင့်ရုံအဆင်သင့်မဖြစ်သေးသည့်အခါချိန်းတွေ့ဂိမ်းသို့ပြန် hopping ခြင်းအားဖြင့်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုချွေးသိပ်ဖို့မကြိုးစားပါဘူး.